I-Semalt: Izizathu Eziyisisekelo Zokuthi AbaHlengi bahlasele Leli Ywebhusayithi
Yimithandazo yawo wonke umuntu onayo iwebhusayithi ukuthi angangeni ezandleni ze-cyberizigebengu njengabaduni. Ibhulogi lonke lomhlaba wonke ligcwele izinhlamvu eziningi ezinye zazo ezisemthethweni ngenkathi zinezinhloso ezingacacile.Njalo ibhizinisi eliku-inthanethi liphathelene ne-SEO nokuthi ungaphumelela kanjani ku-intanethi. Ukuphepha kwewebhusayithi akuyona into ebaluleke kakhulu lapho wenza amawebhusayithi.Abantu ngokuvamile bazama ukwakha amasayithi nomsebenzisi wokugcina noma umgomo wokuphela wewebhusayithi engqondweni. Lokho abakwaziyo ukuthi abaduni bachithaukulala ebusuku ukuzama ukuthuthukisa ukuxhaphazwa kanye nezinqubo, ezingathuthukisa imisebenzi yazo. Ezinye zezihlaselo zokuhlaselwa, okuyinto abaduni abasebenzisa kuzolonke isikhathi sokuphequlula sincike emathuluzi amasha nokuzayo, okwenza ingozi yebhizinisi lonke ku-intanethi.
Ukuze uhlale kude nabaduni, kungase kudingeke ufunde ukuthi kungani laba baduni behlekisaamawebhusayithi. Nansi uhlu olwenziwa nguMax Bell, the i-Semalt Umphathi Wempumelelo Yekhasimende, oveza ukukhanya okusha ngezizathu zaso sonke sokuhlaselwa kwe-hacker eyodwa:
1. SEO ogaxekile.
Umncintiswano ongekho emkhakheni we-e-commerce uyajwayele, ikakhulukazi uma abaduni bedlalaindima. Laba bantu banakho ukweba uhlu lwe-imeyili kusuka kuwebhusayithi yomncintiswano futhi bayisebenzise ukuthatha amakhasimende. Ngenyeamacala, angakwazi ukwehlisa isayithi njengama-hack DDoS, lapho ama-botnets amakhulu ahlasela iseva enezigidi zezicelo ngesikhathi. LeziAbaduni bangase bafune inkokhelo ukuze basuse ukuxhashazwa kwabo okubangele ukulahlekelwa okukhulu.
2. Bamba imali.
Ukukhwabanisa kwe-Cyber ​​kuthola uphethiloli kusuka ekuqothulweni. Izimali eziningi zokukhwabanisa zihamba phezuI-intanethi ivela kuma-akhawunti asebhange aqanjelwe kanye nezinye izinhlelo zokukhokha njenge-PayPal. Kwezinye izimo, abaduni bangasebenzisa i-SQL Injection ukuze bangene kubantuungena futhi wenze ukudluliselwa kwemali njengokungathi yizinhlamvu zangempela. Abanye abaduni bangabaleka imali mboleko ngokusebenzisa imininingwane yomuntu eyebiwe.
3. Bamba imininingwane yokuxhumana.
Abahlaseli bafumana ulwazi oluningi lomuntu. Abakhohlisi be-Cyber ​​bangasebenzisa lolu lwaziukwenza izinsongo kumuntu ohlukunyeziwe. Abanye abantu bangenza amaphutha ngokusebenzisa ama-akhawunti angenawo ama-akhawunti, kuphela ukudlulisela inkinga kumuntu ongalindelekileumuntu. Kwamanye amacala, ulwazi lomuntu siqu njengekhadi lesazisi, i-SSN kanye nelayisense yokushayela kungaba yinto yokuthengisa enetheni elimnyama. Ukubiwa kwe-Identitykanye nezinye izinkohliso ezivamile kuxhomeke kulawa ma-akhawunti. Abasebenzisi kufanele baqaphele lezi zinhlobo zabaduni.
4. Ukuphazamisa ukuthula.
Abanye abaduni bangase bafune ukuthi bangabe besongela isisulu. Nokho,bayangcolisa isimo sokuphepha kwe-intanethi futhi bangenza iwebhusayithi yakho ithole i-Google Hack ifulegi. Amawebhusayithi anjalo anenkinga ngokubeka indawo,futhi yonke inqubo ingenza imizamo yakho ye-SEO ihluleke.
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani i-hacker izothola isithakazelo sokuqothula iwebhusayithi yakho.I-intanethi yonke igcwele izigebengu ze-cyber ezithatha izinsiza ezihlukahlukene zewebhu kanye nokuphepha komsebenzisi. Lonke ulwazi lwe-intanethiAbantu abaningi abaye bahlangana nabasisulu kuyingozi kakhulu. Ngokwesibonelo, abaduni bangaveza impilo yomuntu odumilengokusebenzisa ezinye izithombe, ezingabamba kusuka kwi-intanethi. Ezinye izizathu zokuthi kungani abaduni bangaphazamisa iwebhusayithi yakho kulesi siqondiso. Ungakwazifunda ezinye zazo futhi uthuthukise ukuphepha kwewebhusayithi yakho ye-e-commerce ngokumelene nabaduni.